Maxaad kataqaan 10-Wadan ee Aduunyada ugu liita Dhinac waliba ,Dalka Soomaaliyana kaalintee kaga jirtaa? | puntlandforum.com
Maxaad kataqaan 10-Wadan ee Aduunyada ugu liita Dhinac waliba ,Dalka Soomaaliyana kaalintee kaga jirtaa? June 19, 2012 Qiimeyn ay sameesay Hay’ad laga leeyahay Dalka Mareykanka oo lagu Magacaabo Fund for Peace ayaa soo saartay 10-ka wadan ee aduunyada ugu liita Wadamadaa oo la sheegay in ay la dageen arimo isbiirsaday sida Argagaxisada ,Musuq Maasuqa iyo Burcad badeednimada.
Hay’ada Fund for Peace ayaana qiimeyntan kusameesay 10-Wadan oo kuyaala Caalamka iyadoona kaalinka ugu horeeya Hay’adu galisay Dalka Soomaaliya oo la sheegay in ay la dageen Musuq Maasuq ,Argagaxiso ,Burcad Badeednimo iyo Dowlada Xumo.
Soomaaliya waxa ay sheegtay Hay’adu in ay tahay Wadanka ugu Musuq maasuqa badan ee caalamka ka jira iyadoona Siyaasiyiinta Soomaaliya ay ku tilmaantay Hay’ada kuwa 21-kii sano ee lasoo dhaafay ka geestay Soomaaliya tacadiyo ka baxsan Xuquuqda Aadanaha .
Hay’ada ayaa sidoo kale sheegtay in Sumcadii Soomaaliya la dageen Ururada Argagaxisa iyo Burcad Badeeda kuwaa oo god dheer kusoo riday in Soomaaliya kasoo kabsato bur burkii iyo Dowlad la’aantii mudada heesatay. Qiimeynta 10-ka Wadan la sameeyay ayaa sidan ah
1) Somalia 2) Democratic Republic of Congo 3) Sudan 4) Chad 5) Zimbabwe 6) Afghanistan 7) Haiti 8) Yemen 9) Iraq. 10) dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Africa .
Dhawaan ayey aheed markii iyana qiimeyn ay sameesay Hay’ada Mareykanka laga leeyahay Fadhigeedana yahay Dalka Canada ay sheegtay in Dalka ugu amaanka xun aduunyada in ay Soomaaliya tahay kalainka koowaadna aduunyada kaga jirto.
Cilmi baarisyo kala duwan oo lasameeyay ayaa lagu sheegay in Dalka Soomaaliya dhinaca Wanaaga iyo Hormarka marka la qiimeeyo kaga jiraan kaalinka ugu dambeeya halka dhinaca xumaha iyo amaan darida ,musuq maasuqa kaga jiraan kaalinta ugu horeesa.